देशमा फेरि आगो लगाउने र नाकाबन्दी गर्ने धम्की अायो? कस्ले दिएछ यस्तो धम्की? हेर्नुहोस – PathivaraOnline
Home > समाचार > देशमा फेरि आगो लगाउने र नाकाबन्दी गर्ने धम्की अायो? कस्ले दिएछ यस्तो धम्की? हेर्नुहोस
धनगढी: राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले सरकारले आश्वासन मात्रै बाँडेको आरोप लगाएका छन्। राजपा जिल्ला कार्य समिति कैलालीले बुधबार धनगढीमा आयोजना गरेको ‘असोज तिन कालो दिन’ विरोध सभामा महतोले अझै आश्वासन मात्रै बाँडे चुप लागेर नबस्ने सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। ‘धेरै भयो हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेको,’ उनले भने, ‘धैर्यको पनि बाँध हुन्छ। त्यो बाँध सकिएको छ। फुट्न सक्छ।’ फेरी पुरानो स्थितिमा फर्किन बाध्य नपारियोस ।
‘संविधान सशोधन गर्छु भन्यो, तीन वर्ष सम्म पनि गरेनन्। टिकापुर घटनाको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकालाई छुटाउँछु भनेर उल्टै सांसद रेशम चौधरीलाई प्रमाणपत्र दिएर सपथ खुवाउनुपर्नेमा जेल हाले,’ उनले गुनासो गरे, ‘यस्तै हो भने हामी सडकमा उत्रिन्छौँ। थरुहट र मधेसी जनतालाई सडकमा उतार्छौ।’ उनले मधेसी तथा थारुहरुलाई गोली हानेर संविधान जारी गरिएको र त्यसपछि संविधानमा संशोधन नभएका कारण संविधान दिवसलाई कालो दिनका रुपमा मनाएको बताए।
पत्रकार सम्मेलन मार्फत एनआरएनए जापानको अध्यक्षमा अनिता गुरुङको उम्मेद्वारी घोषणा